Caruusadaha AXB - Soo Iibso Xaqiiqooyinka Jaceylka Dolls Dolls | Urdolls
Waxaad ku siisaa caruusadda AXB ee caruusadda ugu tayada fiican qiimaha ugu fiican
AXB Dolls Macaamiisheenna badankood waxay doortaan inay nala shaqeeyaan maxaa yeelay waxaan leenahay injineero heer sare ah si loo hubiyo shaqooyinka wax soo saarka iyo naqshadeeyayaasha khibradda leh inay ku bixiyaan baakado soo jiidasho leh muddo gaaban. Dhamaan caruusadaha waxay dareemaan jilicsan, jilicsan oo jilicsan, waxayna qaadan karaan muuqaal kasta oo galmo ah oo aad qiyaaseyso oo ku tusaya xaqiiqda cajiibka ah.
Brand:AXB caruusadaha Xigasho ：Shiinaha
Waxyaabaha: Dolls Galmo Jinsi ah Style: Gabdhaha yaryar ee jinsiga ah, caruusada jacaylka, caruusadda jilicsan, jilicsanaanta galmada, iyo wixii la mid ah.
Hordhac ： Waxyaabaha loo yaqaan 'AXB Doll TPE' waa mid deegaanka u roon, aan sun lahayn oo aan waxyeello u lahayn jirka aadanaha; oo ay weheliso habsocodkeeda wax soo saar ee horumarsan iyo midka gaarka ah, maqaarka dusha sare ee caruusadda jinsiga ee la soo saaray waa mid jilicsan oo jilicsan, oo ay ka buuxaan dabacsanaan, wuxuuna leeyahay dareen jilicsan sida maqaarka aadanaha oo dhab ah. Jirka oo dhan waxaa lagu kululeeyaa heerkul joogto ah Heerkulka dhabta ah ee jirka bini'aadamka wuxuuna leeyahay shaqada furitaanka codka markii la taabto.
+ Doll tayo sare leh TPE Dolls
+ Nooca ugu Caansan Doll
+ Noocyo badan oo Jidh ah oo laga kala xusho
+ La mid ah maqaarka dhabta ah ee dhabta ah
+ Qalfoof cusub oo ikhtiyaari ah: kala-goysyo laba-laab ah, garbaha ..
- Qaali laakiin qiimo iibsi ah
141cm AXB Dolls
145cm AXB Dolls
155cm AXB Dolls
157cm AXB Dolls
158cm AXB Dolls
160cm AXB Dolls
165cm AXB Dolls
Leslie - Waqtiga Xaddidan ee Jilitaanka Bilaashka ah ee Qurxinta Dhexdhexaad Naasaha 141CM Dhexdhexaad Caato ah TPE AXB Dolls
Alora - Dhexe Naasaha 141CM Dhexda Khafiifka ah TPE AXB Dolls
Foosto - Naasaha Dhexe 141CM Dhexda Khafiifka ah ee TPE AXB Dolls
Emerie - Dhexdhexaad Naasaha 141CM Dhexdhexaad Caato ah TPE AXB Dolls
Aleena - Naasaha Dhexe 141CM Dhexdhexaad Caato ah TPE AXB Dolls
Ivanna - Naasaha Dhexe 141CM Dhexdhexaad Caato ah TPE AXB Dolls
Saige - Dhexe Naasaha 145CM Dhexda Khafiifka ah TPE AXB Dolls
Reyna - Dhexe Naaso 145CM Dhex Dheer Caato TPE AXB Dolls
Nalani - Dhexe Naaso 145CM Dhexda Khafiifka ah TPE AXB Dolls
Lylah - Mid Naasaha Dhexe 145CM Dhexda Khafiifka ah TPE AXB Dolls
Frankie - Mid Naasaha 155CM Dhexda khafiifka ah TPE AXB Dolls
Reina - Naasaha Quruxda Badan 155CM Dhexda Khafiifka ah ee TPE AXB Dolls
Zahra - Naaso Qurux Badan 155CM Dhex Dheer Caato TPE AXB Dolls
Ensley - Naaso Qurux Badan 155CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Leyla - Naaso Qurux Badan 160CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Lennox - Naasaha Quruxda Badan 157CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Meredith - Naaso Qurux Badan 160CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Henley - Naaso Qurux Badan 165CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
$ 1,589.07 $ 1,589.07
Jemma - Naasaha Quruxda Badan 165CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Aleah - Naaso Qurux Badan 163CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Cheyenne - Naaso Qurux Badan 165CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Virginia - Naasaha Quruxda Badan 141CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Ariya - Naaso Qurux Badan 160CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Gloria - Naaso Qurux Badan 141CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
$ 991.09 $ 991.09
Cecelia - Naasaha Waaweyn 155CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
$ 1,046.09 $ 1,046.09
Mae - Naasaha Waaweyn 165CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
$ 1,528.99 $ 1,528.99
Caddaaladda - Naasaha Waawayn 141CM Dadka Waaweyn TPE AXB Dolls
Elliot - Naaso Waaweyn 145CM Realistic TPE AXB Dolls
Dayana - Naaso Waaweyn 160CM Realistic TPE AXB Dolls
Adrianna - Naaso Waaweyn 165CM Dhab ahaan TPE AXB Dolls
Salem - Naaso Waaweyn 165CM Realistic TPE AXB Dolls
Xiomara - Naaso Waawayn 141CM Realistic TPE AXB Dolls
Sasha - Naasaha Waaweyn 155CM Xaqiiqda TPE AXB Dolls
Bonnie - Naaso Waaweyn 155CM Dhab ahaan TPE AXB Dolls
Angelica - 141CM Naaso Waaweyn Indho Weyn TPE AXB Dolls
Alia - 141CM Naaso Waaweyn Indho Weyn TPE AXB Dolls
Tan iyo dhalashada aadanaha, sababo kala duwan awgood, dadku waxay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan waxyaabaha. Waxay noqon kartaa kelinimo, naafonimo, uurjiifyada qaarkood, ama sababo kale oo aan tiro lahayn. Mid ayaa ah in ragga iyo dumarka qaarkood ay u baahan yihiin caawinta caruusadan galmada ee 100cm si ay u xalliyaan dhaqankooda galmada ee aan caadiga ahayn, ka dibna ...
Caruuska galmada ee 100cm ee maanta ayaa si isa soo taraysa u noqonaya qayb ka mid ah sheekooyinka ku saabsan mustaqbalka galmada iyo cilaaqaadka. Waxaan sidoo kale ku rajo weynahay arrintan, annaga oo u malayneyna in galmo u dhexaysa dadka iyo robotyadu ay noqon doonto dhaqan caadi ah 10 sano gudahood. Qof kastaa wuxuu leeyahay robot! Dadku waxay qeexi karaan dhaca galmada ...
WM Dolls waa qaali, marka waa inaan ka dhignaa kuwo qaali ah. Markaad yeelato boombalahaaga galmada, waxaad samayn doontaa dadaal kasta si aad ugu ilaaliso xaalad wanaagsan. Ku rid boombaladaada sanduuq wax lagu kaydiyo oo aan ku habboonayn, maxaa yeelay tani waxay si dhab ah u dhaawici doontaa jirka caruusadda galmada. Haddii boombalahaagu wasakh yahay, waxay sababi kartaa dhibaato caafimaad ...
Waad jeceshahay WM Dolls, mid ka mid ah astaamaha lagu garto jacaylka ayaa ah farxaddaada sii socota ee aan la sharixi karin. Waa wax aan la fahmi karin dadka kale. Caruusooyinkan silikoonada ah ee noloshooda kor u qaada waxay naftooda ka dhigi karaan qayb aan laga maarmi karin nolosha milkiilaha. Caruusadaha galmada dhabta ah waxaa loo isticmaali karaa weel si loo dhiso xiriir ...
Caruusadaha galmada laabta leh